के तपाईलाई मानिसहरूले मन पराउँदैनन् « रिपोर्टर्स नेपाल
कसैले तपाईलाई अस्वीकार गर्यो वा तपाईलाई माया गरेपनि यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनुहोस्। कसैले तपाईलाई चाहेको होस् वा नहोस् त्यो नितान्त उसको व्यक्तिगत इच्छा हो वा त्यो भन्दा पनि उसको आफ्नै रोजाइ हो ।
व्यक्तिगत रूपमा नलिनुहोस्
कसैले तपाईलाई अस्वीकार गर्यो वा तपाईलाई माया गरेपनि यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनुहोस्। कसैले तपाईलाई चाहेको होस् वा नहोस् त्यो नितान्त उसको व्यक्तिगत इच्छा हो वा त्यो भन्दा पनि उसको आफ्नै रोजाइ हो। तपाईले कसैलाई मन पराउन बाध्य पार्न सक्नुहुन्न् ।
तपाईले मानिसहरूलाई तपाई जस्तो बनाउन के गर्न सक्नुहुन्छ?
आफैमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्। अस्वीकारको अनुभूति अर्को संसारबाट आउँदैन, यो तपाईं भित्रै प्रतिबिम्बित हुन्छ। तपाईसँग यो रोगको उपचार पनि छ। कुनै व्यक्तिले तपाईसँग राम्रो व्यवहार गर्छ तर त्यो मानिस तपाईलाई मन पर्दैन भने के गर्नुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिले आफ्नो हृदयमा हात राखेर साँचो भन्नुहोस्, के तपाईले उसलाई माया गर्नपर्छ भन्ने छ त ? तपाईलाई माया गर्नेहरूलाई माया गर्नुहुन्छ?
तपाईलाई मन नपर्ने मानिसहरूले पनि तपाईलाई मन पराउँदैनन् भन्ने सत्यलाई तपाई झुट बोल्न सक्नुहुन्न। तपाइँ जान्न सक्नुहुन्छ कि यो तपाइँको प्रतिबिम्ब वा प्रतिबिम्ब हो जुन तपाइँको नजिक आउँछ।
सामाजिक ढाँचाले तपाईंलाई अनुमति दिँदैन, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई केही औपचारिकताहरू छन् भनी बहाना गर्नुहुन्छ। जसका कारण मनमा सधैं बोझ रहन्छ। उनीहरुले पनि यस्ता सम्बन्धलाई निरन्तरता दिंदा यस्तै महसुस गरेको हुनुपर्छ । तपाईं आफ्नो यो कुरा उनीहरूसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्न ।
जब तपाईं तिनीहरूको लागि आफ्नो भावनाहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईंले तिनीहरूबाट अपेक्षा गर्न छोड्नुहुन्छ वा तिनीहरूबाट तपाईंको अपेक्षाहरू शून्य हुनुहुनेछ। दोस्रो, यदि तपाइँ उनीहरूसँग कहिले अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ वा उनीहरूसँग व्यवहार गर्नु पर्छ भने, त्यो केवल औपचारिक आदानप्रदान हो र तपाइँ तपाइँको मनमा केहि राख्नुहुन्न।
यदि तपाईं तिनीहरूलाई यस्तो व्यवहार गर्न सक्नुहुन्न भने, यसलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस्। यदि तपाईं रिसाएर काम गर्नुहुन्छ भने, यसलाई पनि स्वीकार गर्नुहोस्। आफ्नो हरेक भावना, राम्रो वा नराम्रो स्वीकार गर्नुहोस्। यो केवल आफ्नो आवश्यकताको लागि नगर्नुहोस्, तर यो बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् कि जसरी तपाईं अरू मानिसहरूलाई मन पराउनुहुन्न, तिनीहरूले पनि तपाईंलाई मन पराउँदैनन्।
अर्को, मानिसहरूबाट मात्र होइन, जनावरहरू, चराचुरुङ्गीहरू, अन्य जनावरहरू, बोटबिरुवाहरू, बालबालिकाहरूलाई जस्तै आफूलाई मन पर्ने व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नुहोस् । तपाईंलाई के मन पर्छ? अब आफैलाई सोध्नुहोस्, के तपाइँ तिनीहरूलाई निःस्वार्थ रूपमा चाहनुहुन्छ वा यो इच्छा पछाडि कुनै विशेष कारण छ? सोध्नुहोस्, के तपाईं तिनीहरूका कमजोरीहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ वा तिनीहरूको कमजोरीहरू भन्दा तिनीहरूको बलमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ?
यसबाट सम्पूर्ण अभ्यासको उद्देश्य यो हो कि तपाईले सिक्काको अर्को पक्ष पनि थाहा पाउनुहुनेछ। आफ्नो अर्को पक्ष मात्र हैन, आफ्नो अनुहार पछाडी लुकेको अनुहार कस्तो छ, अरुलाई कस्तो अनुहार देखाउनुहुन्छ, दुबै अनुहार आफै चिन्नुहोस् । सत्तरीको दशकमा साहिर लुधियानवीले लेखेका छन्, ‘एक अनुहारबाट जीवनभर सबथोक भुल्छन्…